Bruno Fernandes Oo Shaaciyey Magaca Xiddiga Uu Ku Riyoodo In Uu Ka - Axadle Wararka Maanta
Bruno Fernandes Oo Shaaciyey Magaca Xiddiga Uu Ku Riyoodo In Uu Ka
Xiddiga Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa shaaciyey magaca xiddiga xiddig ay riyo u tahay in uu ka garab ciyaaro, kaas oo ay hore iskaga soo garab dheeleen waqtigii uu joogay Talyaaniga.
Fernandes ayaa noqday xiddiga ugu muhimsan Manchester Untied tan iyo intii uu yimid sannadkii 2020, waxaanay si joogto ah iskaga garab ciyaarayeen laacibiinta Paul Pogba, Scott McTominay ama Fred.
Laakiin intan waxa uu jeclaan lahaa in uu heli lahaa oo Old Trafford ay ka wada ciyaari lahaayeen laacib kale oo khadka dhexe ah oo ay hore waqti ugu soo wada qaateen kooxda Udinese ee waddanka Talyaaniga oo uu isguna u ciyaari jiray.
Kubbad-sameeyaha reer Portugal oo waraysi siinayay telefishanka reer Poaldn ee Canal Plas Sport ayaa la weydiiyey ciyaartoyga khadka dhexe ee uu aadka u jeclaan lahaa in uu ka garab ciyaaro, waxaana uu magacaabay Piotr Zielinski oo uu ku tilmaamay ‘laacib sare’ oo khadka dhexe ah.
26 jirkan ayaa yidhi: “Farsamo ahaan, waxa aan odhan karaa waa Zielinski oo intayda ka badan tababartay. Waxa aanu leenahay loollan wanaagsan. Waxaan u malaynayaa waqtigii hore, Zielinski xoogaa wuu xishoon jiray, waxaanu ahaa ciyaartoy da’yar sidayda oo kale waqtigaas.
“Si kastaba, waxa aanu ka nimid waddamo kala duwan, waananu ku kala duwanayn hab-fikirka, farqina wuu jiray. Laakiin waxa aan xidhiidh fiican la lahaa Piotr. Waa wiil sare oo aan aad u jecelahay. Waxa uu ka mid yahay dadkii aan kula kulmay Talyaaniga ee aanu waqti walba xidhiidhi jiray.
“Waxa aan la hadlay bilo ka hor, waxaanan u sheegay in aan jeclaan lahaa in aan mar kale ka garab ciyaaro. Sidaa darteed, yaa og waxa mustaqbalka na sugaya. Aniga ahaan, waa ciyaartoy aad iyo aad u sarreeya.”
Zielinski oo waqtigan u ciyaara Napoli ayaa u dhaliyey siddeed gool iyo 11 gool oo caawiye uu ka noqday, waxaanay qarka u saaran yihiin in ay usoo gudbaan Champions League haddii ay guuleystaan kulankooda ugu dambeeya horyaalka Serie A.
Thomas Tuchel Oo Loo Sheegay In Laacibkan Uu Kaydka Dhigo Kulanka
Dagaal culus oo maanta ka qarxay degmada Wanlaweyn – Caasima…